Maitiro ekuwedzera kana kubvisa ekutanga zvirongwa mune yedu Gnu / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Sisitimu Yekutonga, Desks
Rimwe rematambudziko rinonyanya kunetseka vashandisi veanoshanda masystem, angave ari ehupfumi kana kwete, iko kushandiswa kwezviwanikwa, zviwanikwa zvinogona kuita basa nechikwata kuyerera kana kuzviita gehena.
Kubva pandakatanga kushanda nekombuta makore anopfuura makumi maviri apfuura, chimwe chezvinhu zvandaive ndisina zviwanikwa. Kana iwe ukakumbira 20 Mb yegondohwe, ini ndaive ne64 MB, kana iwe ukakumbira 32 Gb yehard disk, ini ndaive ne2 Mb, yakawanda yacho nekuti yaimbove yaisadhura kutenga michina yemakomputa. Ndosaka riini Gnu / Linux yakasvika pakombuta yangu, zviwanikwa zvakatanga kuyerera zvakanyanya. Asi, iyo nyika yeInternet uye inorema webhu mabhurawuza zvakaita kuti timu ive neyakaenzana zviwanikwa zvakare uye iende zvishoma zvishoma (zviri pachena pamusoro pemakore ini ndachinja makomputa).
Rimwe remabasa andinogara ndichitarisa mukombuta kana zvasvika pakusunungura zviwanikwa iri huwandu hweMapurogiramu ekutanga anotakura. Kuisa zvirongwa uye kunyorera izvo zvatisingashandisi kana kushandisa chete imwe nguva yegore inogona kuisa mutoro unorema kuchikwata chedu.
Sezvineiwo, Kwete chete zvirongwa zvatakaisa asiwo zvinyorwa uye software yakaipa inogona kuchengetwa muKutanga kwesisitimu; pamwe imwe yenzvimbo shoma uko malware inogona kuvanda mukati meGnu / Linux.
Kunetsekana kwangu uku hakuna kusarudzika asi kuripo muvashandisi vakati wandei, kusvika pakuti akati wandei akakurumbira madhesiki akagadzira chirongwa chekubatsira kumisikidza uku kutarisa kwevanoshandisa novice. Tevere isu tichaenda kukuratidza maitiro ekuwedzera kana Bvisa Startup zvirongwa mukati meGnu / Linux.
Kana isu tichitaura nezvekuiswa kwechirongwa, isu tinowanzo kuita mutsauko nerudzi rwekugovera, zvisinei, ikozvino tave kuzosiyanisa maitiro ekuita iri basa kuburikidza nedesktop.
1 Maitiro Ekubvisa Ekutanga Zvirongwa muPlasma
2 Maitiro ekubvisa ekutanga zvirongwa muGnome / Cinnamon / Mate / Kubatana
3 Maitiro Ekuwedzera kana Kubvisa Ekutanga Zvirongwa muXfce
4 Ndeapi mapurogiramu ekutanga atinofanira kubvisa?
5 Ini ndadzima chirongwa nekukanganisa, ndinowedzera sei chirongwa zvakare pakutanga?
6 Uye izvi zvese zvinomhanyisa komputa yangu here?
Maitiro Ekubvisa Ekutanga Zvirongwa muPlasma
Plasma, iyo KDE Project desktop ine novice mushandisi chirongwa iyo inobvumidza chero shanduko kana uchibvisa Startup zvirongwa kana kuwedzera zvirongwa. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche enda kuSystem Preferences. Muhwindo rinowoneka, tinoenda kune iyo Kutanga uye yekudzima nzvimbo.
Iye zvino tavhura ku Autorun uko runyorwa rwezvirongwa zvinotanga neyekushandisa system ichaonekwa. Kuti tivabvise isu tinongofanirwa kushandura iyo mamiriro uye kuidzima. Pazasi isu tine mabhatani maviri ayo anotibatsira kuwedzera chero chirongwa chatinoda kutanga uye / kana kuwedzera script yatinoda kumhanya panguva yekutanga.
Maitiro ekubvisa ekutanga zvirongwa muGnome / Cinnamon / Mate / Kubatana
Muchikamu chino taunza pamwechete madhesiki akati wandei, kunyangwe ari akasiyana, anoshanda nenzira yakafanana zvine chekuita nekuwedzera kana kubvisa chirongwa chekutanga. Chinhu chega chinoshanduka pakati pematafura chichava chiratidzo chekushandisa pachishandiswa kana nzvimbo. Muchiitiko cheMATE, chishandiso chiri muSystem ichiri muGnome chichava mune yakajairwa menyu ekushandisa.
Saka isu tinotsvaga chirongwa "Zvikumbiro pakutanga", chirongwa icho ichave iri muApplication Menyu. Iwindo rakadai rinotevera richaonekwa:
Mune ino runyorwa tinofanirwa kugonesa kana kudzima chirongwa kana chinyorwa icho chatinoda kubvisa. Ichi chirongwa chinotibvumidza kwete chete kuwedzera kana kubvisa zvirongwa uye zvinyorwa asiwo gadzirisa zvakare zvirongwa izvo zvatinazvo mune runyorwa sekutakura chimwe chirongwa uine dzimwe sarudzo kana kugadzirisa paramende yechinyorwa. Chinhu chinonakidza uye chinobatsira.
Maitiro Ekuwedzera kana Kubvisa Ekutanga Zvirongwa muXfce
Mune iyo Xfce menyu isu tinotsvaga izwi rekuti Kutanga uye iyo Session uye Kutanga sarudzo ichaonekwaIsu tinozviita uye hwindo senge rinotevera rinowoneka:
Iye zvino tinoenda kuApplication Autorun tab uye isu tichaona pazasi runyorwa rwezvirongwa zvinomhanya panguva yekutanga. Iye zvino isu tinofanirwa kumaka kana kusamisa mapurogiramu atisingade kutanga nekugovera. Pazasi pechinyorwa ichi tichawana bhatani rekuwedzera. Iri bhatani rinotibvumidza isu kuti tiwedzere chirongwa kana chinyorwa panguva yekutanga kwechikamu.
Ndeapi mapurogiramu ekutanga atinofanira kubvisa?
Mushure meizvi, iwe unoshamisika kuti ndeapi mapurogiramu atinofanira kubvisa uye ndeapi kwete kuti yedu yekushandisa system irambe ichishanda nemazvo. Kana isu tikangoisa iko kugovera, kazhinji hatifanirwe kuve nechero zvirongwa. Chishandiso chinotsamwisa mumaonero angu ndeche Kubatanidzwa kwaBlueman. Ichi chishandiso chinotarisira zvishandiso kuburikidza neBluetooth, asi kana komputa yedu isina bluetooth, haina musoro kuti itakure. Kutumira mameseji kunowanzo kuve pane urwu runyorwa uye kunetsa, kunyanya kana tisingazovashandise nguva dzose. MuUbuntu, iyo SSH kiyi mumiririri yakajairika, chirongwa chakakosha kana tikabatana kure, asi kana tisingazombozviita, hazvina musoro kutakura chirongwa ichi. Kana isu tikashandisa doko senge Plank, isu tinofanirwa kuve nacho pachiratidziri ichi nekuti zvikasadaro hachizotakurwa pakutanga kwechikamu.
Kazhinji, hapana hurongwa hunotiudza kuti chishandiso chei chatinofanira kuva nacho uye kwete, zvese zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi. Asi, chinhu chakanakisa kushandisa bhurawuza rewebhu seDuckDuck Go uye tsvaga maapplication atiri kurodha muKutanga uye kubvisa izvo zvatisingade.
Ini ndadzima chirongwa nekukanganisa, ndinowedzera sei chirongwa zvakare pakutanga?
Kana isu tiine zvirongwa zvakawanda kana kana tikavhiringidzika nekukanganisa, zvinogona kuitika kuti isu tinobvisa chimwe chirongwa nekukanganisa kubva pane izvo zvinyorwa. Kuti tikwanise, tinongofanira kubaya "Wedzera" bhatani uye tsvaga chirongwa icho chatinoda kurodha. Kazhinji zvirongwa zvese Ivo vari mukero / usr / sbin kana / usr / bin. Muchiitiko chekuwedzera script isu tinofanirwa kuita maitiro akafanana asi tosarudza script panzvimbo yechirongwa. Chinhu chakanaka nezve iyi sarudzo ndechekuti isu tinokwanisa kugadzira zvinyorwa zvedu uye kuita kuti iyo system iite mamwe mashandiro apo kugovera kuchitanga.
Uye izvi zvese zvinomhanyisa komputa yangu here?
Zvinoenderana. Kana isu tine sisitimu yekushandisa yakatakurwa nezvirongwa uye zvinoshandiswa panguva yekutanga system, "Kuvhenekera" iyi runyorwa inobvumidza komputa kumhanya zvakanyanya kuyerera uye kutanga nekukurumidza., sezvo zvisina kufanana kumhanyisa zvirongwa zviviri semakumi maviri ezvirongwa.
Asi komputa yedu inogona kunge isina dambudziko iro, ndiko kuti, inoshandisa mashoma mapurogiramu asi zvakadaro inoshanda zvishoma nezvishoma. Mune ino kesi, isu tinofanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekugadzirisa dambudziko iri, sekushandura desktop kana kuwedzera Hardware yekomputa yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuwedzera kana kubvisa ekutanga zvirongwa mune yedu Gnu / Linux kugovera